Barnaamijyada Si Lacag La'aan Ah aad ula Hadli karto Qaraabadaada Iyo Asxaabtaada Kala Jooga Dunida Dacaladeeda
HometechnologyBarnaamijyada Si Lacag La'aan Ah aad ula Hadli karto Qaraabadaada Iyo Asxaabtaada Kala Jooga Dunida Dacaladeeda
Sidaan horay u ballan qaadnay waxaan wadnaa Barnaamajka BAARGAALTECH oo ah barnaamij aan bulshada uga faaiidaynayno Arimaha La xiriira Technologiyada iyo computerka , internetka iwm .
Todobaadkan Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa barnamijyada Si Lacag La'aan Ah Aad Ula Hadli karto Qaraabadaada Iyo Asxaabtaada Kala Jooga Dacalada Dunida
Waxaa jira barnaamijyo farabadan oo suurtagal ka dhiga in lagu wada xiriiro maqal iyo muqaal iyo qoraal. Waxaana qoraalkan ku ogaan doonaa barnaamijyadaas qaar ka mid ah oo lacag la'aan ah loogu waci karo asxaabta iyo qaraabada ku nool daafaha dunida.
Barnaamijyadaas oo lagu shubto Telefoonada labada qof ee is-wacaya (qofka la wacayo iyo qofka wacaya).
Sidoo kale waxaa lagurakibi karaa computer-ada qofka wacaya iyo kan la wacayo.
Barnaamijyadaas waxaa ka mid ah:
Viber waxa uu kamid yahay barnaamijyada ugu caansan, looguna isticmaalka badan yahay (maqal iyo qoraal). Waxaana lagu waci karaa meel kasta oo dunida dacalladeeda ah oo leh adeegga telefoonada ku xiriirsan khadka internet xawaare wanaagsan ama WIFI tayo wanaagsan,
waxaana muhiim ah in Viber ku jiro telefoonada labada qof ee kuwada xiriiraya, haddii kale waa lacag.
Barnaamijka Viber waxaa lagu rakibi karaa Telefoonada gacanta sida Android, iOS(iPhone), Windows Phone iwm. Marka telefoonka lagu rakibo,waxaa calaamadda Viber ka muuqan doontaa telefoonnada asxaabta kuugu jirta qaybta xiriirka ee telefoonkaaga, waa asxaabta leh Viber – ee aad kula hadli kartid lacag la'aan
Tango waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu wada xiriiro oo leh maqal iyo muuqaal iyo qoraal (text).
Skype waa barnaamijka loogu isticmaalka badan yahay ee loo isticmaalo in lagu wada hadlo oo leh maqal iyo muuqaal, qoraal toos ahna la isugu qori karo.
Fring waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu wada xiriiro oo leh maqal iyo muuqaal.
Nimbuzz waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu wada xiriiro oo leh maqal. Waxaana lagu rakibi karaa telefoonada gacanta ee loo yaqaanSmartPhones.
ooVoo waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu wada xiriiro .
WhatsApp waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu wada xiriiro (qoraal) iyo duubid cod maqal ah ( audio masage ), sanadka hore waa bilaash lakiin wixii ka danbeeya 1$ sanadkii
wixii su'aalo ah ama codsi ah Waxaana Nagala Soo xiriir kartaan
Email : baargaal@gmail.com